Iindaba -Ngaba Ubusazi ukuba ii-airbags zokumiliselwa kwenqanawa zihlala zixubene ne-Pneumatic Fenders?
Ngaba ubusazi ukuba ii-airbags zokwazisa ngenqanawa zihlala zixubene ne-Pneumatic Fenders? Iibhola zomoya zisetyenziselwa ukwazisa ngenqanawa kwaye ngenxa yoko zisebenza ngendlela eyahluke kwaphela kunaleyo ifunyanwa ngabaPhefumli. I-Pneumatic Fenders zikhusela izakhiwo zeenqanawa kunye neenqanawa, ngakumbi ngexesha lokusebenza kwenqanawa ukuya kwinqanawa. Umgangatho kunye nokusebenza kwawo ngamnye kubo kubaluleke kakhulu. IiAirbags zinceda ukumilisela ngokukhuselekileyo inqanawa kwaye isebenza iyonke ebonakaliswa kwiimfuno ezisemgangathweni ezisezantsi kunye nendlela elula yokuvelisa. Indlela yokuvelisa ii-airbags ayinakuthelekiswa nenye yePneumatic Fenders.
Inflatable ibhola intshayelelo:
I-infender ye-rubber fender (ekwabizwa ngokuba yibhola) luhlobo lwe-moor buffer kunye nokukhuselwa kwenqanawa, esetyenziswa ngokubanzi kwiinqanawa, amaziko aselunxwemeni, amaqonga onxweme, amazibuko, amadolophu, ii-yachts kunye nezinye iinkalo. Ibhola yerabha enokungeniswa iluncedo ngakumbi kunokusasazeka kweerabha fender, kwaye iyonga, ngoko ithandwa kakhulu.
I-fender e-inflatable sisiqulatho somoya esirhabaxa esenziwe ngokuxhoma ilaphu njengethambo. I-fender kunye nebhola inokuhamba emanzini emva kokuba izaliswe ngumoya oxinzelelweyo. Zibalulekile kwi-berthing ye-ship-to-ship kunye ne-ship-to-wharf Buffer medium. Kwangelo xesha, i-pneumatic fender inokuthi ifumane amandla empembelelo yenqanawa, inciphise ukubuyela kwenqanawa, kwaye iphucule kakhulu ukhuseleko lwedike yenqanawa.
I-inflatable fender (ngebhola) isebenzisa umoya njengesixhobo esiphakathi kwaye isebenzisa umoya ocinezelweyo ukufunxa amandla eempembelelo, isenza ukuba inqanawa iguquguquke xa imisa isikhephe, ukuze kufezekiswe isiphumo sokungqubana nokungqubana nokungqubana. Abafaki abangenayo (ngebhola) baye basetyenziswa kakhulu kwiitanki, iinqanawa zeekhonteyina, iinqanawa zobunjineli, iinqanawa zokuloba elwandle, amaqonga aselunxwemeni, amazibuko amakhulu, amazibuko omkhosi, iipali ezinkulu zebhulorho kunye nezinye iintlobo zeenqanawa kunye namaqonga onxweme.
Irabha yeFender, Inqanawa yomoya, Iibhola zomoya zasemanzini, Iinqanawa zeTec, Ibhloko edibeneyo, China Irabha Fender,